Barashada af iswiidhishka ee dadka ajaanibta ah - orebro.se
Barashada af iswiidhishka ee dadka ajaanibta ah
Barashada afka Iswiidhishka ee dadka ajaanibta ah SFI, waa barashada aas-aasiga ah ee luqada Iswiidhishka iyo bulshada Iswiidhanba waxaana loogu talo galay qofka aan afkiisa hooyo ahayn luqada Iswiidhishka. Si aad wax uga barato Iskoolka SFI:ga waa in da´daadu ka wayntahay 16 sano, ka diiwaangashantahay degmada Örebro isla markaana haysato nambarka shaqsiga oo kaamil ah.
Waxaa jira koorsooyin kala duwan, heerka luqadaada iyo habka aad wax u baraneysid. Koorsadu waa lacag la´aan laakiin sfi maku qaadaneysid lacagta la siiyo ardayda dusgsi sare ama jaamacadaha dhigta oo kale. Adiga iyo la taliyahaaga xagga waxbarashada ayaa go´aan kawada gaaraaya koorsada adiga kuu qalanta. Ujeedada aad luqada u baraneysid, aqoontaadii hore iyo khibradaada waxay muhiim u tahay koorsada laguugu qoraayo.
Qaadashadu waa is daba joog
Saacadaha waa laguu bedbedeli karaa haddii aadan awoodin inaad dhigato waqtiyada uu iskuulku furan yahay
Marwalba oo aad koorso dhameysid waxaa lagu siinaayaa shahaado
Qof walba intay isku heer yihiin xagga luqada ayuu ku fasal noqonaayaa
Inta sfi la dhiganaayo waxaa ku jiro xilli shaqo barasho (baraatiik)
Koorsooyin xirfad lagugu diyaarinaayo ayaa lagu siinaayaa iyadoo wada shaqeyn lala sameynaayo xafiiska shaqada
Qofka jaamiciga ah waxa uu luqadda ku baranaayaa dugsiga sare ee dadka waaweyn (seeraalaha ay degmadu maamusho)
Waxaa laguu sameynayaa maab dejin/dariiq hagid, luqadana waxaa laguugu baraa heerka ay waxbarashadaada gaarsiisan tahay, ayadoo la raacinaayo barashada suuqa shaqada. Waxaa lagaa caawinaayaa in laguu tarjumo/la qiimeeyo shahaadaada hore.
Haddii aad dooneysid shahaado oo keliya waxaad sameyneysaa imtixaanka luqada.
Vägledningscenter, cinwaankeeda waa Hagagatan 53.
Qaxooti cusub oo sharciga mar dhow helay hadaad tahay waxaad tagtaa Xafiiska shaqada oo ku yaala Olaigatan 4.
5 todobaad gudahooda ayaa waxaa ballan kuu sameynaaya la talilyaheena xagga waxbarashada iyo shaqada ka dibna waxaad bilaabeysaa iskuulka.
Ma qabtaa su´aal? fadlan la xiriir mid ka mid ah la talliyeyaasha xagga waxbarashada
019-21 39 53 ama 019-21 57 55.
Senast uppdaterad: 14 May 2018
Publicerad: 28 February 2018